Raysal wasaare Ku xigeenka DFI, Madaxwaynaha DDSI, Wasiirka Waxbarashada DFI Ayaa Maanta Dhagax Dhigay Jaamacada Labaad Ee DDSI Laga Hirgalinayo Ee Qabridahar University. - Cakaara News
Raysal wasaare Ku xigeenka DFI, Madaxwaynaha DDSI, Wasiirka Waxbarashada DFI Ayaa Maanta Dhagax Dhigay Jaamacada Labaad Ee DDSI Laga Hirgalinayo Ee Qabridahar University.
Qabridahar(CN) Khamiis.April.09.2015 wafti sare oo ay horkacayeen raysal wasaarae kuxigeenka DFI mudane Damaqe Mokonin iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta ku horeeyay magaalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeele Halkaas oo waftigu shirar kusaabsan warshada Sonkorta kuyeeshay, Waftiga ayaa Godey kadib kasoo dagay magaalada Qabridahar ee xaruta gobolka Qoraxey halkaas oo ay madaxwaynaha , raysal wasaaruha, iyo wasiirka waxbarashada DFI mudane Sheferew Shigute si wada jira u dhagax-dhigeen Jaamacada labaad ee degaanka laga hirgalinayo ee Qabridahar University.
Waftigan ayaa waxaa kamid ahaa wasiirka waxabarashada DFI mudane Sheferaw Shegute, taliyaha guud ee ciidanka qaranka ee bariga Itoobiya Gen. Abraham W/mariam, wasiirka shaqada iyo arimaha bulshada DFI mudane Cabdiftaax Sheekh Cabdulaahi, afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq, Afhayeen kuxigeenka golha federeeshinka DFI mudane Rashiid Xaaji, madaxwayne kuxigeenka DDSI mudane Cabdixakiim Cigaal Cumar, maareeyaha waaalada naqshadaynata DDSI Eng. Zubeer Cabdulaahi Axmed, iyo masuuliyiin kale.
Xafladan dhagax dhiga Jaamacada Qabridahar oo ahayd mid maal mahanba si heer sare ah loo agaasimay ayaa waxaa sidoo kale halkaas kusugnaa xubnaha gudiga fulinta, golaha Cabinetka, maamulada gobolda iyo degmooyinka DDSI, ugaasyada, Garaadada, suldaamada DDSI, wakiilada shacabka iyo waxgarad ka kala socday 68 degmo ee DDSI, culumo awdiinka, maal qabeenada, iyo marti sharaf kala duwan.
Munaasibadan oo ay kasoo qayb galeen kumaanaan ayaa waxaa ugu horayntii lagusoo dhawayay oo kahadlay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo khudbad dhaxal gal ah kasoo jeediyay ugana mahadceliyay ergooyinkii iyo wakiilada dhamaan deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xaflada kasoo qayb galay.
Wasiirka waxbarashada DFI mudane Sheferow Shegute ayaa madaxwaynaha kadib lagusoo dhaweeyay isagoo halkaasi kasoo jeediyay khudbad soo jiidatay dhamaan qalbiga shacbaka deegaanka islamarkaana sheegay dareenkiisa iyo sida uu ugu faraxsanyahay jaamacada Qabridahar oo kamida 13-ka jaamacadood ee dalkeena Itoobiya sida cusub ee qorshaha GTP-2 laga hirgalinayo.
Kadib waxaa lagu soo dhaweeyay raysal wasaare kuxigeenka dalka ahna gudoomiye kuxigeenka ururka EPRDF mudane Dhamaqe Mokonen oo khudbad dhaal gal ah halkaasi kasoo jeediyay ayaa ugu horayntii shacabka DDSI iyo Itoobiya dhamaan ugu hanbalyeeyay jaamacada Qabridahar University, wuxuuna raysal wasaare kuxigeenku amaanay dhaqanka shacabka deegaanka Soomalida Itoobiya isagoo sheegay in dadka deegaanku ay kaalin hormuudnimo kaga jiraan Itoobiyada cusub.
Raysal Wasaare kuxigeenka ayaa sheegay in shacabka deegaanku ay kaalin laxaad leh kaga jiraan guud ahaanba houmarka Itoobiya sida mashaariicda waawayn ee Biyo xidheenka Abbay. Kadib wuxuu kahadlay isbadalka dhabta ah ee kajira DDSI isagoo sheegay in DDSI uu kajiro isbadal xawli ah oo nabadgaliyada iyo horumarkuba gaadhay gees ka gees. Wuxuuna raysal wasaare kuxigeenku isbadalkan DDSI uga mahadceliyay shacabka deegaanka, ciidanka qaranka iyo ciidamada gaarka ah ee Liyuuga oo uu ku amaanay doorka naf hurista ah ee kuleeyihiin hirgalinta DDSI.
R/wasaare kuxigeenka ayaa markuu khudbadiisii dhameeyay sheegay inuu fariin uga waday Raysal wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn oo sheegay inuu jeclaa inuu yimaado balse hawlo shaqo ku mashquulay wuxuuna shacabka deegaanka soo faray inaad sii wadaan nabadgaliyada iyo horumarka aad maanta hanateen.
Dhanka kale wuxuu mudane Dhamaqe Mokonin kulamo iyo shirar khaas layeeshay odoyaasha iyo waxgaradka deegaanka ee kusugnaa Magaalada Godey iyo magaalada Qabridahar. Shirarkaas khaaska ahaa oo u badnaa horumarka iyo nabadgaliyada ayay odoyaashu uga mahadceliyeen dawlada deegaanka iyo dawlada federaalka ee hirgalisay isbadalka wayn ee maanta DDSI gaadhay.
Raysal wasaare kuxigeenka ayaa sidoo kale sheegay inay dawalada federaalka iyo ururka EPRDF ay kufaraxsantahay isbadalka DDSI isagoo tusaale u soo qaatay shirkii ugu danbeeyay ee ay dhawaan kuyeesheen golaha dhexe ee EPRDF magaalada Addis Ababa kaasoo lagu xaqiijiyay horumarka iyo isbadalka balaadhan oo ay EPRDF sheegtay inay muhiim tahay inuu sii socdo isbadalka iyo horumarka xawliga ah ee maanta ka jira DDSI.
Guud ahaan waxaa maanta magaalada Qabridahar ay ku hadh-gashay farxad wayn oo qaran taasoo ay shacabka DDSI kamuuqatay far xad iyo rayn rayn iyagoo aad u hadal haya guusha u soo hoyatay DDSI iyo guuda ahaanba mashaariicaha qaran ee wareega labaad ee qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha ee shanta sano.